ငါသည် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ကြင်နာသည်ဖြစ်၍ - MYATMINGALAR
သတင်းဆိုသည်မှာ လူကို ခွေးက ကိုက်လျင် သတင်း မဟုတ်ပါ။ ခွေးကိုလူက ပြန်ကိုက်မှသာ သတင်းမည်ပါ၏တဲ့။ ရူူှင်းလင်းချက်ကတော့ ခွေးဆိုသည်မှာ လူကို ကိုက်တတ်သော သဘာဝရှိသောကြောင့် ကိုက်တတ်သောခွေးက လူကို ကိုက်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် မထူဆန်းသောကြောင့် သတင်းအဖြစ် ရေးသားတင်ပြ၍ မရပေ။ သို့စေကာမူ သဘာဝကြောင့် ပြန်ဖြစ်၍ အကိုက်ခံရမည့်လူက ကိုက်ရမည့်ခွေးကို ပြန်ကိုက်လျင်တော့ သတင်းဖြစ်သွားပြီတဲ့။
သစ္စာရယ်၊ အိန္ဒြေရယ်၊ ကွန်တောရယ် ဟူသော ငယ်သူငယ်ချင်း သုံးဦး ရှိကြပါသည်။
သစ္စာက သွက်လက်ဖျတ်လတ်သည်။ ရုပ်ရည်ကတော့ ဗွီဒီယို မင်းသမီးလေးတစ်ဦးနှင့် တော်တော်တူပါသည်။ စားပြော ပွင့်လင်းသည်။ လူမှုရေးတိုင်းမှာ ထိပ်တန်းကပါသည်။ အသင်းတော်တိုင်းတွင်လည်း ဓမ္မတေးများကို ပါဝင်သီဆိုနေကြ။ တစ်ချို့ကသူ့ကို ဆတ်စလူးခါတဲ့ ကောင်မလေးဟု အတင်းပြောခြင်း ခံရသည်။ သစ္စာတို့တွငိ မောင်နှမငါးဦးရှိသည်။ သစ္စာက ဒုတိယလူ၊ သူ့အထက်မှာ သူ့အမရှိသည်။ သူ့အောက်တွင် မောင်တစ်ယောက် ညီမလေးနှစ်ယောက်၊ စီးပွားရေးအခြေအနေကတော့ အထည်ကြီးပျက်တွေ။
နောက်တစ်ယောက် . . .အိန္ဒြေ
နာမည်နှင့်လိုက်အောင် တည်ငြိမ်သူ။ သူ့အလှက တိမ်ညိုကင်းစင်သော လပြည့်ဝန်းအလှ။ အေးအေးဆေးဆေး သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ စကားပြော တတ်သူ။ ယောက်ျားလေး အပေါင်းအသင်းဆိုလို့ ကွန်တော်တစ်ယောက်သာရှိသည်။ အိန္ဒြေက တတိယမြောက်လူ၊ မိသားစုစီးပွားရေး အတန်အသင့်ကောင်းသည်။ ကက တစ်စီးပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ တစ်ခုတော့ရှိသည် သူ့မိသားစုက ငွေမက်ပါသည်။ ကွန်တော် ထိုက်အောင်။ ပညာရေး ထူးခွန်မှုရှိသည်။ အတန်းသားချင်းတူပေမယ့် အားလုံးကို စာပြန်ပြနိုင်သည်။ ယခုတက္ကသိုလ်တွင် သစ္စာရယ်၊ အိန္ဒြရယ်၊ ကွန်တော်ရယ်က ဘာသာတူ၊ အတန်းတူတွေ၊သူတို့နှစ်ယောက်ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက စာပြလာနေကြ၊ ယခုတိုင် ကွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေက မနာလို ဖြစ်ကြသည်။ သစ္စာနှင့် အိန္ဒြတို့၏ ကောက်ရိုးပုံစောင့်တဲ့ခွေးတဲ့။ အချို့ကတော့ကိုရံတော် တပ်မှူးတဲ့။ ကွန်တော်က မောင်နှစ်မ ငါးယောက်တွင်ဒုတိယလူ၊ ကွန်တော့်မိသားစုက စီးပွားရေးအခြေအနေ သိပ်မကောင်းပါ။ တကယ်တမ်း ကွန်တော်နှင့်ကြိုက်နေတာက သစ္စာပါ။ အိန္ဒြေက ကွန်တော့်ကို တစ်ဖက်သတ်ကြိုက်နေပါသည်။ သို့သော် သစ္စာနှင့်ကွန်တော် ကြိုက်နေမှန်းသိသောအခါ နောက်ဆုတ်ပေးရင်းမှ၊ အိန္ဒြေက မျက်ရည်ဝဲဝဲနှင့် ပြောခဲ့သည်။ “ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပေါ့ဟာ သစ္စာရဲ့စရိုက်နဲ့ နင်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဆို နင်တို့တစ်နေ့ကွဲကျမှာ အဲဒီအခါဆိုရင် ဗဒင်သီချင်းထဲကလိုပေါ့။ နင့်အတွက်တစ်နေရာစာ ငါရင်ထဲမှာ ချန်ထား ပါတယ်ဟာ . . .”တဲ့။ သြော် ကွန်တော့် ရည်ရွယ်ချက်အတော့ ဘွဲ့ရပြီးတဲ့အခါ ကျမ်းစာကျောင်းတက်ပြီး သင်အုပ်အရာကို တောင့်တနေသူပါလေ။ အရေးပေမှုကို ခံရသောကြောင့် တစ်ချို့က
အတွေးရေယဥ်ကြော နစ်မြောနေဆဲ ယူကလပ်ပင်အိုကြီးအောင်မှာ ဗြုန်းကနဲ စက်ဘီးတစ်စီး၏ ပွတ်တိုက်ခြင်းကိုခံရ၍ လက်ထဲမှ စာအုပ် ပြုတ်ကျသွားသည်။ လမ်းနှင်အလွတ်ကြီး သစ်ပင်အောက်တွင် ှရပ်နေသူမှ ဝင်၍ တိုက်သော စက်ဘီးရှင်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ တဟားဟား ရယ်မော နေသောသစ္စာ
“ဟာ သစ္စာ နင်က မိန်းကလေးတန်မဲ့ အိန္ဒြေပျက်လှချည်လားဟ”
သစ္စာက တဟားဟား ရယ်မောနေရင်း
“အိန္ဒြေ မပျက်သေးပါဘူးဟ။ ခုပဲ အိန္ဒြေသူ့အိမ်မှာ ထိုင်နေတာ အကောင်းကြီးပဲ”
“ဟဲ့ လူအိန္ဒြေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ရွေပေးလို့မရတဲ့ မိန်းကလေး အိန္ဒြေကိုပြောတာဟ” သစ္စာက စက်ဘီးပေါ်မှ ခုန်ဆင်းလိုက်ရင်း
“ထိုက်အောင်ရယ် မိန်းမလေးအိန္ဒြေက ရှေပေးလို့ မရပေမယ့် ဒေါ်လာပေးရင် ရသတဲ့ဟ ခု နင့်ဘော်ဒါ အိန္ဒြေကို ဒေါ်လာစား သဘောင်္သား တစ်ယောက်နဲ့ပေးစားဖို့ သူ့အိမ်က အိန္ဒြေနဲ့ အတင်းနားချနေတာ”
“နင်ကရော သစ္စာ၊ ဒေါ်လာနဲ့ လာဝယ်ရင်ရော”
“ငါက ပိတောက်ဆိုပိတောက်၊ တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်ပါပဲ။ နင်သာမဖေါက်နဲ့” လေအဝှေ့တွင် သစ္စာ၏ ဆံနွယ်တို့ လှုပ်ခတ်သွားသည်။ ပါးချိုင့်အပြံုးက သူ့အလှကို ပို၍ ပေါ်လွင်စေပြန်သည်။
“နင်ကလည်းဟာ- ငါ့ကို ထိုင်အောင်လို့ မခေါ်ပါနဲ့ဟ”
“ဟိုလေ . . . ဟို . . . ဟာ မောင်လို့ ခေါ်ပါဆို ခုဟာက အမေခေါ်တဲ့အတိုင်း ထိုက်အောင်တဲ့”
“ထိုက်အောင်ခေါ်တော့ ဘာဖြစ်လဲ ဟဲ့”
“ဟိုဟာလေ အိမ်ထောင်ကျပြီး သားသမီးရတဲ့အခါ မလေးတွေ ရှေ့မှာ နင်က ထိုက်အောင်လို့ခေါ်တော့ ကလေးတွေက ၀ိုင်းရယ်မှာပေါ့”
“ဟိုလေ မောင် ပါဆို”
သစ္စာက စက်ဘီးကို နင်းရင်းမှ-
“ခေါ်လိုက်ပြီဟေ့ ထိုက်အောင် ငပေါကြီး” “အေး ဟေး”
နူးည့သောလေသံ လှည့်ကြည့်လိုက်သော၊ သိမ်မွေ့သောအပြံုးနှင့် အိန္ဒြေ။
အိန္ဒြေက ဝင်ထိုင်ရင်းမှ လက်ထဲမှ အထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်လှမ်းပေးကာ
“အကိုကြီး အန္တလေးက ပြန်ဘာတာ၊ ထိုက်က ထိုးမုန့်ကြိုက်မှန်းသိလို့ အိန္ဒြေလိုက်တာလေ၊ ရော့ စားနော်”
“ဟာ အိန္ဒြေတို့မ အရမ်းသိတတ်တာဘဲ သစ္စာနဲ့ ကွာပါ့ကွာ”
အိန္ဒြေမျက်ဝန်းအိမ်မှာ ပန်းနုရောင်သိမ်းသွားရင်းမှ တုန်ခါသော အသံနှင့်
“ဒါနဲ့တောင်အိန္ဒြေကို မကြိုက်ခဲ့ သစ္စာကို သွားကြိုက်ရသေးတယ်နော်”
“အချစ်ဆိုတာ အဲဒါပေါ့ အိန္ဒြေရဲ့” ဒါထက် နေပါဦး နင့်ကိုနင့်အိမ်က သဘောင်္သားတစ်ယောက်နဲ့ နားချနေတယ်ဆို”
အိန္ဒြေက မတ်တပ်ထရပ်ရင်းမှ တည်ငြိမ်စွာ ပြောလိုက်သည်
“နင့်အတွက် ငါရင်မှာ ချန်ထားတဲ့ တစ်နေရာစာဟာ ဒီတစ်နှစ်အတွက်ဘဲ အချိန်ပေးနိုင်တယ်။ ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာ နင်ငါ့ရင်ထဲ ပြန်လာရင်တော့ အချိန်မီသေးတယ် သွားမယ် ထိုက်”
အားလုံးဘွဲ့ရသွားကြပြီ . . .
ကွန်တော့်အမေးကြောင့် ယူကလစ်ပင်အောက်တွင် အတူထိုင်နေရာမှ သစ္စာက မတ်တပ်ထရပ်ရင်း မော်ဒယ်တစ်ယောက် ပမာလမ်းလျောက်ပြရင်းမှ
“ထိုက်အောင် ငါပိုလှ မလာဘူးလား”
“ပျော်လို့ပါဟ ဒီည ငါအလုပ်ဝင်ရမယ်”
“ည ညမှာ လုပ်ရမယ့်အလုပ်”
“ဟုတ်တယ် ရှေသီချင်းသည် စားသောက်ဆိုင်မှာ သီချင်းဆိုရမယ်လေ အစ်မတို့လည်း သဘောတူတယ် ပန်းကုံးတို့ သရဖူတို့လည်း ထပ်ရမှာဟ”
ကွန်တော့်အသံက မိုးကြိုးသံလို ဟိန်းသွားသည်။
“ဟဲ့ နင့်ကို မွေပေါက်လိုက်တာလား”
“ဟဲ အလန့်တကြား ဘယ်မှာလဲ မွေ”
“မွေက နင်လေ နင်၊ နင်ဟာ မွေဟောက်မ သစ္စာဆိုပြီး သစ္စာဖေါက်တာ။ စားသောက်ဆိုင်မှာ အဆိုတော်လိုပ်ပြီး ပျက်စီးချင်လို့လား နင့်အိမ်က ဒီအလုပ်မျိုး သဘောတူတာ အ့ပါရဲ့”
“အော် နင်က ငါ့တစ်အိမ်လုံးကို လုပ်ကွေးနိုင်လို့လား”
အတွေးမခေါင်စမ်းပါနဲ့ဟာ စားသောက်ဆိုင်မှာ ဆိုပြီးတော့ နာမည်ကြီးအဆိုတော်ဖြစ်သွားသူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းဘယ်မှ မရွေ့ပါဘူး။ စားသောက်ဆိုင်မှာ မဆိုဘဲ ပျက်ဆီးနေသူ တွေလည်း အပုံပါဟ။
“ဆိုမယ် ငါ့မောင်လေးက သည်နှစ်တက္ကသိုလ်စတတ်ရပြီ၊ အစ်မကလည်း ကျန်းမာရေး ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ အစ်မကလည်း သူ့အိမ်ထောင်နဲ့သူ၊ ငါသီချင်းဆိုမယ်။ အဲသည်မနေ အဆိုတော်ကြီး ဖြစ်စေရမယ်”
“ဟာ ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ ထိုက်အောင်ရယ်”
ကွန်တောတို့ရပ်ကွက်လေးမှာ သစ္စာနှင့် ကွန်တော် လမ်းခွဲသွားပြီ ဆိုသော အတင်းလေးက တောမီးပမာ ပျံနှံ့လို့သွားချေပြီကော . . .
“ထိုက် အိန္ဒြေဆီကို အချိန်မီရောက်လာပြီနော်”
“ဒီလကုန်ရင် သဘောင်္အရာရှိနဲ့ မိဘတွေက အတင်းနားချနေပြီ အိမ်ကို ဖွင့်ပြောလိုက်တော့မယ်နော် အိမ်က သဘောတူအောင် ထိုက် သဘောင်္တက်ပေတော့”
ချစ်ရည်ရှန်းစိုသောအလှ မျက်ဝန်းတို့ဖြင့် အိန္ဒြေ၏အလှသည် ကွရွနေ၏။
“ဟာ အဖေ အမေက သဘောတူမှာ မဟုတ်ဘူး။ အိန္ဒြေလည်း သဘောမတူဘူး။ ထိုက်က ဆင်းဆင်းရဲရဲ မနေနိုင်ဘူး။ ခု အမေတို့သဘောတူတဲ့ သဘောင်္အရာရှိက တိုက်နဲ့၊ ကားနဲ့၊ ဆယ်လူလာနဲ့ ဒေါ်လာစားပဲဟာ”
“ငါ့ အဘိုးက သင်းအုပ်ဆရာလေ။ အဘိုးနေရာကို ဆက်ခံရမယ်။ ငါကိုယ်တိုင်ကလည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက တရားဟောဆရာလုပ်ဖို့ ဆက်ကပ်ထားတာ ဟ”
“မဖြစ်ဘူးထင်တယ် အမေက တရားဟောဆရာဆို သဘောတူမှာ မဟုတ်ဘူး”
“ဘာလိုပလဲဟ တရားဟောဆရာကို ဘာလို့ သဘောမတူရတာလဲ”
“အမေတို့ကပြောတယ်။ တရားဟောဆရာဆိုတာ နေ့တွက်မကိုက်ဘူးတဲ့”
“ဘာ တရားဟောဆရာက နေ့တွက်ကိုက်လို့လား ဟုတ်လား”
“ထိုက် ကိုအိန္ဒြေလေ ရင်နဲ့အမျ ချစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ . . . ”
“ဘာ ဒါပေမယ့်လည်း ရှင်းရှင်းပြောပါအိန္ဒြေ”
“အမေ့မှာ နှလုံးရောဂါ ရှိနေတယ် ထိုက်”
ဝတ္တုတစ်ပုဒ်ထဲမှ စကားတွေကု် အိန္ဒြေပြောလာခဲံပြီပဲ
– အိန္ဒြေတစ်ယောက် သဘောင်္အရာရှိ ဒေါ်လာစားနှင့် လက်ထက်လိုက်ခြင်း၊
– သစ္စာတစ်ယောက် စားသောက်ဆိုင်တွေ လူကြိုက်များသော ဆိုတော်အလေး ဖြစ်နေခြင်း၊
– ကွန်တော်ထိုက်အောင်တစ်ယောက် ငါးရ့နှစ်ကောင်စလုံးလွတ်ကာ အသည်းကွဲပြီး ကျမ်းစာကျောင်းတက်နေခြင်း၊
“အိန္ဒြေ HIV ဖြစ်နေပြီတဲ့ “အစ်ကို” ညီမလေးက ပြောလာသည်။
သောက်လက်စကော်ဖီခွက်ကို ပင်ချမိရင်းက ဟုတ်ရဲ့လား ညီမလေးရယ်ဟု စိတ်မကောင်းစွာမေးမိသည်။
“ညီမလေး တို့ မနေ့ညနေက မိသဟာယအစီစဥ်မှာ အိန္ဒြေ အမေ ကိုယ်တိုင် ဆုတောင်းချက်ငိုပြီးတင်တယ။ အိန္ဒြေယောက်ျားဆီကပါလာတာ။ လက်ထက်တုန်းကဆေးမှမစစ်ခဲ့တာ၊ ငွေပဲစစ်ခဲ့တာလေ”
“သစ္စာက ရှေ သစ္စာဆိုပြီး စီးရီးခွေ ထုတ်တာ ပေါက်သွားတယ် အစ်ကိုရေ။ တစ်နေ့ကဘုရားကျောင်းမှာ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့လာလှူသွားတယ်”
“အစ်ကို အထင်လွဲနေတာ သစ္စာက အခုထိ စောင့်နေတာ သစ္စာနှလုံးသားက ဖြူပါတယ် အကို သစ္စာဟာ ကျမ်းစာနဲ့အညီ မိဘကို လုပ်ကွေးတယ်။ သူ့မောင်လေးတောင် ဆေးတက္ကသိုလ်ကို ကောင်းကောင်းတက်နေပြီ။ သစ္စာက ယောက်ျား လုံးဝမရှုပ်ဘူးအကို ပြီးတော့ ဘုရားလည်းချစ်တယ်။ သစ္စာကို သူ့လိုဘဲ စားသောက်ဆိုင်မှာ သီချင်းဆိုရင်းနာမည်ကြီး အဆိုတော်ကနေ သူဋ္ဌေးဖြစ်သွားတဲ့ အဆိုတော်မမက ညီမအရင်းလိုချစ်ပြီး ကူညီခဲ့တာ သစ္စာက နဂိုကတည်းက ရုပ်လည်းရှိ၊ အသံလည်းရှိတော့ ကောင်းချီခံစားရပြီ။ ခုလည်း ထုတ်ဝေသူ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေတာ”
“ယောက်ျားမရှုပ်ဘူး ဆိုတာ တကယ်လား”
“ညီမ အသိဆုံးပါ ပြီးတော့ သစ္စာက ပိတောက်ဆိုပိတောက်ပါဆိုတာ ညီမက တစ်ဆင့် အစ်ကိုကိုပြောခိုင်းထားတာ”
“မထူးတော့ဘူး အစ်ကို ထပ်ပြောရဦးမယ်။ အခု တစ်နှစ် နှစ်နှစ်အတွင်း အိမ်မှာ စီးပွားရေး ကျသွားတာ အစ်ကိုအသိဘဲ။ အစ်ကို ကျမ်းစာကျောင်း ကောင်းကောင်းတက်နိုင်အောင် ရိုးသားစွာ လှူခဲ့တဲ့ အမည်မသိ အလှူရှင်ဟာ သစ္စာပါ”
ယူကလစ်ပင်အိုကြီးအောက်မှာ ကွန်တော်ထိုက်အောင် . . . နောက်မှ စက်ဘီးတစ်စီး ကွန်တော့်ကို ဝင်တိုးသည်။ လက်တွင်းမှ စအုပ်ပြုတ်ကျ သွားသည်။ နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။
ဗွီဒီယိုမင်းသမီးတစ်ယောက်လို လှပနေသော အလှပိုင်ရှင် စက်ဘီးပေါ်က ဆင်းလာသည်။ သူမ၏ ဆံနွယ်စတွေကို လေပြေက လှုပ်ခတ်နေသည်။ ပါးချိုင့်အပြုံးနှင့် သစ္စာသည် လေပြေထဲတွင် အလှဆင်နေပြီ
“ထိုက်အောင် တို့တစ်တွေ ပြန်ဆုံကြပြီနော်။ အသည်းကွဲသင်းအုပ် ဆရာကြီးရယ်၊ နင်နဲ့ကွဲကွာနေတဲ့အချိန်မှာ ငါလည်း အရမ်းခံစားရပါတယ် ဟာ နင့်ကိုလွမ်းလို့ ခံစားချက်တွေနဲ့ သီချင်းဆိုရင်က ငါလေ ရှေသစ္စာဆိုပြီး အောင်မြင်လာတာပါ။ ကဲ သင်းအုပ်ဆရာကြီးရေ သစ္စာ ရင်တွေခုန်နေလို့ ငြိမ်သက်ခြင်းရအောင် တရားရေအေး အမြိုက်ဆေးကို တိုက်ကွေးပါဦးလား နော် . . .”
ကွန်တော်က သစ္စာ၏ နူည့သောလက်ကလေးကို ဖွဖွလေး ဆုပ်ကိုင်ပြီး ကျမ်းစာအုပ်ကို ဖွင့်လိုက်ကာ
“အဟမ်း သည်ကနေ့ကွန်တော်ဟောမယ်ကျမ်းကတော့ မဿဲ ၁၉း၆ ပါ ဘုရားသခင် ဆက်စပ်၍ ထမ်းပိုးတင်တော်မူသောအရာကို သူမခွဲခွာစေနဲ့”
သစ္စာနဲ့မေတ္တာကို သခင်ဘုရားရှေ့၌ ဒူးထောက်လိုက်ကြပြီ
သတင်းဆိုသည်မှာ . . .
နေ့တွက်မကိုက်သော တရားဟောဆရာ ပေါက်စလေးတစ်ဦးနှင့် နေ့တွက်အလွန်ကိုက်သော စတီရီယိုတေးသံရှင်မလေးတို့ ရှေလက်ခိုင်ခိုင် တွဲနေကြပြီဆိုတာကို သတင်းဟုခေါ်ပါသည်။